protable opera မှာ မြန်မာဖောင့်မရလို့ - MYSTERY ZILLION
protable opera မှာ မြန်မာဖောင့်မရလို့
September 2010 edited October 2010 in Internet & Email
မရောက်ဖြစ်တာတောင်ကြာပြီဗျာ အခု မှ log in ၀င်ရတယ် ။ ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုရှိလို့ ပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီ က firefox browser က သုံးလို့မကောင်းဘူး dowload တွေ လည်းလုပ်မရဘူး ။ အဲဒါ opera ကိုသုံးတော့ ကောင်းတယ် download လုပ်တော့ ကောင်းတယ် အဲဒါနဲ့ အဲဒါပြောင်းသုံး တော့ သူက အလုံးတိုင်းမှာ မရှိဘူး ။ အဲဒါနဲ့ protable opera ကို download လုပ်သုံးတယ် ။ အဆင်ပြေပေမဲ့ မြန်မာဖောင့် မရဘူး ။ preference မှာ zawgyi font ပြင်ပေမဲ့ ထွက်မလား ဘူး ။ မြင်လဲမမြင်ရဘူး ။ သုံးလို့လဲမရဘူး ။ကျေးဇူး ပြုပြီး ဖြေပေးပါနော် ။ အခု log in ၀င် ရတုံးမေးရတာ မလို့ပါ ။ ဖြေပေးပါ
UFT-8 ကော ပြောင်းလိုက်လားမသိဘူး? ပြန် Check ပေးပါလား?
Opera အဟောင်းတွေကလွဲရင် ဗမာစာမရပါ Font ပြောင်းလည်းမထူးပါဘူး။
May be nearly look alike IE9 beta.
Firefox က အဆင်ပြေပါတယ်။ စက်တိုင်းမှာလဲ ရှိပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Firefox ပဲ.. ပြီးတော့ Chrome!
Chrome က Firefox လောက် Unicode အထောက်အပံ့မပေးပေမယ့် တခြား Brower တွေထက်တော့ ကောင်းတယ်ဗျ. Opera ကအရင် Version တွေတော့ကြိုက်ပါတယ်။ အသစ်တွေတော့ မြန်မာဖောင့် ကြောင့် မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။ Firefox မှာ Download အဆင်ပြေချင်ရင် Downthem All နဲ့ Download Helper plugins တွေကို သုံးကြည့်ပါ။ ကြိုက်သွားလိမ့်မယ်..